Eyona yacht inkulu ehlabathini | Uhambo lweNdaba
UMariela Carril | 03/05/2022 17:00 | ngokubanzi
Bathi ukuba ixesha ngoku imfuno iiyacht ezinkulu iyakhula kwaye, ngokutsho kwabenzi kunye nabathengisi, yayisuka ngo-2019 ukuba yonke into yanda njengoko inani lezigidigidi ezibangele ubhubhane landa. Ihlabathi lethu elilusizi, apho abanye baphulukana nemisebenzi yabo befumana izigidi ezingaphezulu ...
Namhlanje imarike ifuna iiyacht ezinkulu nezikhudlwana kwaye ngokutsho kwento abayithethayo oku kusaqala. Oyena makhi weyacht obaluleke kakhulu yinkampani yaseJamani iLürssen, eneendawo zeenqanawa ezisibhozo ezikumantla welo lizwe laseYurophu. Abaqulunqi, abanini kunye nabakhangisi basebenza kunye ukuze baqinisekise ukuba, ekugqibeleni, iminqweno yabo babeka amatyala iyazaliseka. Namhlanje, eyona yacht inkulu ehlabathini yile uyibona efotweni, iAzzam. Ngaba siyayazi?
IAzzam, yeyona yacht inkulu emhlabeni
Namhlanje yeyona yacht inkulu ehlabathini Kubude beemitha ezingama-180, nangona ngo-2024 kukho enye kwindlela yokulinganisa i-183 yeemitha. Ngaphezu koko, inkampani yaseJamani yokwakha i-yacht ebesithetha ngayo ngaphambili ithi ngumba wexesha kuphela phambi kokuba iiyachts zibe ziiyacht ezinkulu eziziimitha ezingama-200 ubude. Lumkhwa.
Ke, i-Azzam yeyona yacht inkulu kwi-180 yeemitha ubude. Yeyona yacht yabucala ibiza kakhulu ukusukela ngo-2013 kwaye ekuqaleni ibimfutshane ngeemitha ezingama-35. I-Azzam yakhiwa nguLürssen phantsi kwesikhokelo sobunjineli uMubarak Saad al Ahbadi. Wayenayo ixabiso le-600 yezigidi zeedola, nje ukwakhiwa, kwaye ekuhambeni kwexesha yakhula kwaye yakhula yada yafikelela ekupheleni kwexesha elide.
Isikhephe saqashwa ngoAprili ka-2013. Yakhiwe yinkampani yaseJamani iLürssen Yatchs, eyilwe yiNauta Yatchs kunye noyilo lwangaphakathi nguChristophe Leoni., yakhiwa kwiminyaka emithathu iyonke, ixesha elirekhodiweyo. Kunyaka ongaphambili, ngo-2012, i-Azzam yafuduswa kwidama layo lokuqala eliziimitha ezili-170 ubude yasiwa kwelikhulu eliziimitha ezingama-220 ukuze igqibezele imisebenzi. Kwakusekupheleni kwe-2009 xa intsimbi yenqanawa yaqala ukunqunyulwa kwaye ngoko, ngo-2013, imisebenzi yagqitywa ekugqibeleni.
le yacht Inendawo yokuhlalisa iindwendwe ezingama-36 kunye nabasebenzi abancinci abangama-50 kunye namalungu angama-80 aphezulu.. Inegumbi lokuqeqesha igalufa kunye nendawo yokuzivocavoca, kwaye ngaphandle i-stellar. Iholo yayo ephambili inobude obuziimitha ezingama-29 kunye nendawo evulekileyo yeemitha ezili-18 ngaphandle kweentsika zenkxaso, into emangalisayo. Ukunika indawo iindwendwe ezininzi kukho 50 iisuti kwaye umgangatho, kakuhle, awunazo iindawo ezivulekileyo ezinkulu.
Imigca yangaphandle, iprofayili, ithwala utyikityo lwe Uyilo lweNauta, istudiyo esekwe nguMario Pedol, yaye xa uyijongela kude ibonakala incinane kunaxa uyijongela kufutshane. Izinto eziluncedo zokuyila ngenyameko.
Ngokweefoto ezijikelezayo enqanaweni, it ineedekhi ezintandathu kunye noyilo uye iteknoloji yokukhathalela okusingqongileyo, kunye nokunciphisa i-carbon monoxide kunye nokukhutshwa kwengxolo. Kukwacingelwa ukuba amandla angaphezulu asuka kwii-injini asetyenziselwa inkqubo yokukhupha ityuwa ekuguquleni amanzi abe ngamanzi okusela.
Kodwa iAzzam ayisiyonqanawa ecothayo, njengoko unokucinga kubungakanani bayo (loo nto malunga nezigebenga zicotha). Oku akunjalo, i-Azzam yinqanawa ekhawulezayo leyo inokufikelela kwisantya ukuya kuthi ga kwi-31 knots enkosi kwiiinjini zayo ezimbini zepetroli kunye neenjini ezimbini zedizili ezisebenzisa iijethi ezine. UAzzam inobunzima obumalunga neetoni ezili-14 lamawaka kwaye itanki yayo yamafutha inomthamo woku isigidi seelitha zamafutha. Kuqikelelwa ukuba ixabiso lilonke lalingama-605 ezigidi, malunga ne-100 yezigidi ngaphezulu kweyeyethi yesithathu ngobukhulu emhlabeni, kusetyenziso lwabucala, I-Eclipse.
Kodwa owagunyazisa ukwakhiwa kwale yacht ibalaseleyo? Ngokucacileyo, umArabhu onemali eninzi: i Khalifa bin Zayed Al Nahyan, uMongameli we-United Arab Emirates. Kucingelwa ukuba inokuqeshwa ukuba iqeshwe, kodwa yintelekelelo kuphela. Kwaye lithetha ntoni igama? Ukuzimisela.
Ndicinga ukuba umongameli we-UEA akanamdla kakhulu ukuba kubiza malini ukugcina esi sikhephe sincinci, kodwa kubiza kakhulu. Kubonakala ngathi i-10% yeendleko zayo yinto echithwa kuyo isondlo ngonyaka. Oko kukuthi, abanye 60 yezigidi zeerandi ngonyaka.
Ukuba kukho i-yacht enkulu emhlabeni kufuneka kubekho I-yacht yesibini ngobukhulu emhlabeni… Injalo, ukuvala inqaku lanamhlanje endilibonisayo I-eclipse super yacht. umnikazi wayo URoman Abramovih, usozigidi waseRashiya, usomashishini, umnini phakathi kwezinye izinto ze-Chelsea FC ye-Premier League. Ukwakhiwa kwayo kwathatha iminyaka emihlanu kwaye ixabisa i-409 yezigidi zeedola, ngoko ixabiso layo langoku, kunye ne phuculo eyenziwe ukusukela ngoko, yi-620 yezigidi.
Ukugcina le nqanawa kubiza i-65 yezigidi ngonyaka. I-Eclipse yiyacht yombane wedizili, iinjini zayo yi-Azipod kwaye uyilo lwayo lwangaphakathi lunotyikityo lwendlu yesiNgesi iTerence Disdale Design, idekhi yomnini yabucala imalunga neemitha ezingama-56 ubude kwaye inokwamkela iindwendwe ezingama-36, kwiikhabhathi ezili-18, kunye nabasebenzi 66 abantu. Yinqanawa yodidi, mhlawumbi intle ngakumbi kuneAzzam.
Yongeza i-helipads ezintathu kunye ne-16-meter pool yokubhukuda ukuze uphumle phakathi elwandle kwaye, xa kungekho mntu uyisebenzisayo, ifihliweyo ibe yindawo yokudanisa kunye nesithuba sokuvutha komlilo olungileyo. Kuya kufuneka kuthiwe xa kubonakala i-Azzam, i-Eclipse yasithwa ngokoqobo, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo isikhephe saseRussia siseyiyacht ephezulu phakathi kweeyachts ezinkulu.
Ngokucacileyo, uluhlu lweeyacht ezibizayo kwihlabathi liyaqhubeka. Besele sitshilo kwasekuqaleni ukuba ngamaxesha athile kukho imfuneko eyandayo yezi nqanawa kuba inani lezigidi-gidi ezingasaziyo ukuba lenze ntoni ngemali engaka kwiiakhawunti zazo likhulile.
Izikhephe ezilandelayo kuluhlu zezi Dilbar, ngu-Uzbek oyibhiliyoni u-Alisher Asmanov, 156 yeemitha, i I-Mahrousa, i-145.72 yeemitha, i-yacht yomongameli waseYiputa kunye nenkulungwane ye-XNUMX okanye Flying Fox, 136 yeemitha, ekhe yaqashwa nguBeyonce kunye noJay Z.
El dubai, evela kuSheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum waseDubai, kunye ne-162 yeemitha ubude, i Nord wavota ngo-2021 nakuLürsse, i ISITYHI Iimitha ezili-183 kodwa hayi ubunewunewu kodwa uhambo lusalungiswa kwaye kulindeleke ukuba livotelwe ngo-2024 kwaye ekugqibeleni, ePoland i-910 yeemitha ze-Y120 ikwinkqubo yoyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » eyona yacht inkulu ehlabathini
Ukutya okuqhelekileyo kweCordoba